Izinto ezinokubangela ukuwa kwemarike yemasheya | Ezezimali
Ukuphazamiseka kwimarike yemasheya yimeko ngokuqinisekileyo ehleli ezingqondweni zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Akunakulityalwa ukuba kwezinye iimeko Amashishini alinganiselwe ukukhula ngama-80 %, njengakwimeko yaseMelika. Le nyani inefuthe kuphuhliso lwe-bearish meko kungekudala, enokuthi ibambe uninzi lwabathengi abanezikhundla ezivulekileyo kwiimarike ze-equity ezingalindelwanga. Iya kuba luncedo kakhulu ke ukuba singafumana ezinye zezitshixo ekuqalisweni kwezi ntshukumo kwimarike yemasheya.
Enye into ethathelwa ingqalelo kwezi ntsuku ngabahlalutyi bezemali yinto yokuba uqoqosho olukhulu lwenzeka kumazwe ahambele phambili kwezolimo kwihlabathi. Oku kungakhokelela kwilahleko kwiimarike ze-equity kubaluleke kakhulu kwizikhundla zokuthatha kade. Nokuba kunokwenzeka ukuba siphulukane nesiqingatha senkunzi esiyityalileyo kule mihla. Le yimeko ekufuneka siyiphephe ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto eziqwalaselwayo. Ukunyuka okukhulu kwimarike yemasheya kulandelwa luhlengahlengiso olusengqiqweni kulungelelwaniso lwamaxabiso alo.
Ngelixa kwelinye icala, singekhe silibale ukuba kuninzi lokhuseleko oludweliswe kwiimarike zezabelo ngokucacileyo zithengisiwe. Omnye wale mizekelo wenziwe ngabo bakwicandelo lombane abangayekanga ukunyuka kwiinyanga ezidlulileyo kwaye bafikelele kwixabiso elingaphezulu kwamaxabiso abo. Ukuba licandelo eliyingozi kakhulu ukuvula izikhundla ngalo mzuzu kanye ngenxa yamandla onyukayo kwiiveki ezidlulileyo. Apho kula maxesha kuninzi kunokulahleka kunokuzuzwa.
1 Ukuwa: iziphumo zeshishini
2 Ukuqhubela phambili kwinqanaba lokunyuka
3 Ukuhlatywa kwicandelo lokuthengiswa kwezindlu
4 Ukungazinzi kutshintshiselwano lwemali
Ukuwa: iziphumo zeshishini
Iziphumo ezilandelayo zeshishini ziya kuba yithemometha egqibeleleyo yokujonga imeko yokwenyani yeenkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ukuya kwinqanaba lokuba ezinye Iziphumo zeshishini lousy inokuba sesona sizathu sokuwa kwexabiso lesitokhwe. Ingakumbi ukuba zingaphantsi kwezilindelweyo ezibekwe ziimarike zezemali. Ke ngoko, ayizukubakho enye indlela ngaphandle kokunikela ingqalelo kwindaleko yayo kwiikota ezizayo.
Kwelinye icala, kuya kuba ngumdla kakhulu ukubona ukuba ziya kuba njani iimpendulo zeenkampani ezidwelisiweyo ukunqongophala kokukhula koqoqosho kumagunya aphambili ehlabathi. Kuba, enyanisweni, uqikelelo lwemibutho ephambili yamanye amazwe (kubandakanya neNgxowa-mali yeMali yeHlabathi) iya kwelicala Ngokufika kokuhla okucothayo kuqoqosho lwamanye amazwe. Ngenxa yoko, ngokoluvo lwe-IMF, iBrexit kunye neengxaki zoqoqosho e-China. Ukuba ubungqongqo babo buchazwe ngakumbi, akukho mathandabuzo okuba ezi ziganeko ziya kuba nefuthe elibi kurhwebo lokulingana kwihlabathi liphela.
Ukuqhubela phambili kwinqanaba lokunyuka
Enye into efanelekileyo enokuba neziphumo ezibi kakhulu kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela kukuba Iibhanki eziphambili ze-European Union kunye ne-United States inzala inyuka kwangaphambili kunangaphambili. Ziya kuba nefuthe elibi kakhulu kwiimarike zezemali kwaye zibekho ngokwenyani ukuba ukuwa okukhulu kunokuba nakho kwiimarike zamanye amazwe, nkqu nokuwa kwexabiso lokhuseleko lwebhanki. Ngaphezulu kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwendalo yezobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Ngelixa kwelinye icala, olu tshintsho kumgaqo-nkqubo wezemali, kwezi ndawo zibalulekileyo zejografi, luya kwamkelwa kakubi kakhulu ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi. Phi uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka Ngokucacelwa yikristale ngoku kuthengwa ngoku. Oko kukuthi, ukulahleka kwexabiso kwizabelo zeenkampani ezidweliswe kwiimarike ze-equity. Kwaye oko kunokubangela ingxaki entsha kwezi marike zezemali. Ayothusi into yokuba kuyakufuneka sithathele ingqalelo into enokwenzeka kwezi ntsuku kwiibhanki ezikhuphayo kumacala omabini e-Atlantic. Kuba imali eninzi isemngciphekweni ukusukela ngoku.
Ukuhlatywa kwicandelo lokuthengiswa kwezindlu
Ngokubhekisele kwimarike yokulingana yaseSpain, eyona ngozi inokuthi ivele kwindaleko yecandelo lokuthengiswa kwezindlu. Enye yezona zinto zibalulekileyo kuqoqosho lwesizwe nalapho Imveliso yasekhaya encangathi (GDP). Ngale ndlela, umngcipheko webhola entsha kwicandelo ivula imeko entsha kwimarike yaseSpain. Hayi kumaxabiso ecandelo lezitena kuphela, kodwa nakwamanye aseleyo abambe le meko ukuba abanye abahlalutyi beemarike zezemali babone kwangaphambili.
Ngelixa kwelinye icala, kukho umqondiso omncinci onika umqondiso omncinci malunga nale meko kwaye kukunyuka kwexabiso lezindlu. Apho idatha yamva nje ibonisa ukuba indawo yokuhlala ye-100 yemitha kwisithili seSalamanca esihle kwikomkhulu laseSpain Ixabiso eliphakathi kwi-700.000 euro. Emva kokunyuka kwamaxabiso ale misebenzi ephantse ibe yi-10%. Uloyiko olukhokelela ekubeni umntu aqwalasele ukuba le yintengiso egqithileyo kwaye inokubangela ukuba ibhabhalazi lotyholwa kakhulu lokuthengiswa kwezindlu.
Ukungazinzi kutshintshiselwano lwemali
Nangona ingabalulekanga kangako, imfazwe yokutshintsha kwemali ayinakuhoywa. Apho kwiintsuku zamva nje i-euro yayiwele kwicala le-1,12 yedola kwaye ukusuka kwelo nqanaba, ngaphandle kokulahleka kumaxabiso okuvala mihla le, yaqala yabuya. Kodwa ukubonisa ukungavisisani kwintengiso yotshintshiselwano kwaye kunokubangela ukungafani okukhulu phakathi kwabanye babanini bezi mali zikazwelonke. Nangona ngeendleko zokuqikelela ukuba banakho ukufumana inzuzo enkulu kwimisebenzi yexesha elifutshane, becinga umngcipheko othile kwimisebenzi eza kwenziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izinto ezinokubangela ukonakala kwintengiso yesitokhwe